Ukraine oo heegan gelisay ciidankeeda - BBC Somali
Ukraine oo heegan gelisay ciidankeeda
2 Maarso 2014
Image caption Dad banaanbaxaya oo ka soo horjeeda Putin
Raiisul Wasaaraha KMG ah ee Ukrainian Arseniy Yatsenyuk, ayaa ku eedeeyay Ruushka inay dagaal ka dhan ah dalkiisa iclaamiyeen, waxaana uu ku boorriyay Madaxweyne Putin in iuu ciidankiisa militeriga dib ula baxo.
Inkasta ooo Ukraine ay sheegtay in aanay ridi doonin xabadda ugu horreysa haddana waxay ciidankeeda gelisay heegan buuxa, waaxana ay u yeertay ciidanka keydka ah.
Masuuliyiinta Kiev waxa ay weydiisteen saddex qaybood oo militeriga Ukraine ah oo lagu hareereeyay Crimea in jid ay ka baxaan oo ammaan ah la siiyo.
Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa ku adkeystay in Ruushki ay xaq u leeyihiin inay difaacaan danahooda dalka Ukraine.
Isaga loo la hadlayay Madaxweyne Obama maalin kadib markii sida muuqata ay ciidanka Ruushku la wareegeen maamulka Crimea, ayaa r Putin waxa uu sheegay inay jirto khatar Ruushka kaga soo socota halkaasi.
Xoojinta ciidamada ayaa hadda halkaasi ka socota gobolka.
Isaga oo ka hadlayay shirka deg degga ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Danjiraha Ukraine Yuriy Sergevey waxa uu cambaareeyay tallaabooyinka Ruushka.